Orodyahano soomaaliyeed oo ka qeyb ka qeyb qaatay ciyaaro ka dhacay Göteborg -
[ June 19, 2018 ] Dhibaato dagaal ganacsi kaga dhex Bilaaban karto Maraykanka iyo Shiinaha oo sii kordhaysa	Wararka
[ June 19, 2018 ] Maxaa Looga Hadli Doono Shirka Madasha Oslo Iyo R/Wasare Kheyre Oo Ka Qeyb Galaya	Wararka
[ June 19, 2018 ] Maamulka Hirshabelle Waa Magac u Yaal “Waxaana Ka Masuul ah In uusan Shaqeeyn Madaxda Sare ee Hirshabelle”	Arimaha bulshada
[ June 19, 2018 ] Diyaarado Dagaal Oo Dad Ka Qafaashay Degaano Ka Tirsan Gobolka Sh/ Hoose	Wararka
[ June 19, 2018 ] Xulka Sacuudiga Diyaaradii ay la socdeen oo Dab qabasaday xili ay hawada ku jirtay	Wararka
HomeciyaarahaOrodyahano soomaaliyeed oo ka qeyb ka qeyb qaatay ciyaaro ka dhacay Göteborg
Orodyahano soomaaliyeed oo ka qeyb ka qeyb qaatay ciyaaro ka dhacay Göteborg
July 15, 2017 F.G ciyaaraha 0
Magaaladda Göteborg ee caasimadda seddexaad ee dalkaan Iswiidhan, ayaa shalay marqiribkii waxaa lugu qabtay tartan ciyaaro fudud oo heer caalami ah. Ciyaarahan oo loogu magac darray Göteborgs Grand Prix oo sanad kasta lugu qabto magaaladda ayaa waxaa ka soo qeyb galay ciyaarahano kala duwan oo qeybaha ciyaaraha fudud ka kooban yihiin ciyaaraha.
Dhalinyarro soomaaliyeed oo dalal kala duwan u ciyaarayey ayaa tartankan ka qeyb qaadanayey. Suldaan Xassan waa orodyahan soomaaliyeed oo u dheela dalka Iswiidhan wuxuu ku ordaa seddexda iyo shanta kun miter. Halka uu isna garoonka ciyaaraha ka socdeen geestiisa ku sugnaa Maxamed Cali oo ku ordka seddexda iyo shanta kun, inkastoo ciyaartii shalay ee labadda orodyahan ordayyeen aheyd 3000 mitir. Saacadu kolkeey aheyd toddobaddii fiidnimo ayey Maxamed iyo Suldaan bilaabeen orodkoodii ay ku doonayeen in nin walba kaalinta koowaad galaan. Haase ahaatee nasiibku uu ka hiiliyey labadda ordyahan oo kala galay kaalimaha afaraad iyo shanaaad.
Inkastoo ciyaartii shalay aheyd mid caalami ah oo dalal badani ka soo qeyb galeen, ayey mar ay labadda orodyahan ay la hadleen shabakadda ceelbarafonline.com waxaa ay sheegeen in kaalamiha ay kala galeen ee shanaad iyo afaraad aaneey ka hor is taageeyn ciyaaraha kale ee iyagana xilliyo dhaw la qabanayo.
Suldaan Xasan oo ah orodyahan u ordayey gobolka Göteborg ayaa sheegay in bishan luulyo 22-keed uu ka qeyb qaadan doono ciyaaro kale oo halkaasi lugu qabanayo. Wuxuu tilmaamay in rajo ka qabo in halkaas guul kala soo hoydo. Suldaan waa orodyahan aad u dheereya intii ay socodtay ciyaartana aan marna dib u dhicin balse nasiibka ka hiiliyey.
Suldaan ayaa ah ciyaaryahanka da’da ee juunyeerka ugu dheereeya xilligan dalkaan Iswiidhan sida uu sheegay tabarahiisa Kurt. Balse waxaan rajeeyneyna in fagaarayaasha caalamiga ka soo dhex muuqan doona isagoo gaaray hankiisii ahaa inuu la caan noqdo orodyahanadda caan baxay ee Maxamed Faarax (MO Farah) iyo Mustafa Maxamed oo labaduba u kala orda Ingiriiska iyo Iswiidhan .